ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံ အထိမ်းအမှတ်ရက်ကို နီးလာပြန်ပြီ။ အဲဒီနေ့က စလို့ ဘ၀တွေ တဆစ်ချိုးသွားခဲ့ကြတဲ့ မိသားစုတွေ ကျမတို့ တိုင်းပြည်မှာ ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ။ ဘာလိုလိုနဲ့ ၁၉ နှစ်ပြည့်တော့မယ်နော်။ ကျမ ကိုယ်တိုင်လည်း အဲဒီကစလို့ ရည်မှန်းချက်တွေ ပြောင်း၊ မျှော်လင့်ချက်တွေပြောင်း၊ ဘ၀တွေ ပြောင်းလဲသွား လိုက်တာ ဘယ်လိုမှ ထင်မှတ်မထားတဲ့ ၀န်းကျင်တွေမှာ ကျင်လည် ရှင်သန်နေရတာ ခုထိ ဆိုပါတော့။ အဲဒီလိုပဲ ကျမသူငယ်ချင်း တယောက်ရဲ့ ဘ၀လေးကို သတိတရနဲ့ ရေးမိတဲ့ ရသစာစုလေး တပုဒ်ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မျှဝေခံစား ကြည့်ပေးပါဦး။ နည်းနည်းရှည်သွားလို့ အပိုင်းခွဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
လျှပ်စစ်မီးတွေ ထိန်ထိန်ညီးနေပြီး နေ့နဲ့ည မကွဲပြားတဲ့၊ ကမ္ဘာမှာ ထိပ်တန်းနာမည်ကြီး နိုင်ငံတနိုင်ငံ ဖြစ်တဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာ သမီးရောက်နေတယ် အမေ။ သမီးတို့ နေတဲ့ အထပ်မြင့် အိမ်ယာတခုရဲ့ အပေါ်ထပ်ပြတင်းပေါက်ကနေ အပြင်ကို လှမ်းကြည့် လိုက်ရင် ရောင်စုံမီး တွေနဲ့ လှလိုက်တာ။ ဒီနေ့ ဘယ်လိုမှ အိပ်မရပဲ ကောင်းကင်က ကြယ်တွေ စုံညီနေတဲ့ ညကို ကြည့်ရင်း အဖေနဲ့အမေ့ကို သမီး သတိရနေပါတယ်။ အခုချိန်မှာ အမေသာ သမီးအနားမှာ ရှိနေရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ။ သမီး လုပ်နေရတဲ့ အလုပ်တွေကို မြင်ရင်အမေက ဘာပြောနေမလဲ ဟင်၊ အမေ့တသက်တာမှာ၊ အဖေ့ တသက်တာမှာ ဘယ်လိုမှ တွေးထင်မထားတဲ့ အလုပ်အမေရဲ့ ။ သမီးကြီးလာရင် တက္ကသိုလ်က ဆရာမ လုပ်မယ်နော် အမေလို့ ငယ်တုန်းက ပြောခဲ့ဘူးတာလဲ မေ့ထားလိုက်ပါပြီ အမေရယ်။ အခု သမီး လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေ ရောင်းတဲ့ ဆိုင်မှာ အရောင်း စာရေးမပေါ့။ ဒါတောင်မှ သမီးက အင်္ဂလိပ်စကား ကောင်းကောင်း ပြောနိုင်လို့ အမေရဲ့။ သမီးတယောက် ဒီမှာ အဆင်ပြေနေ တယ်လို့ ပြောလို့ ရပေမယ့် အနာဂါတ် မျှော်လင့်ချက် ဆိုတာကတော့ သမီးရဲ့ မွေးဖွားရာ ဇာတိတိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂါတ် ပေါ်မှာပဲ ပုံအောထားဆဲပါ အမေရယ်။
အမေ့ကို ဆံပင်တွေ တခေါင်းလုံးဖြူနေတဲ့ မိန်းမကြီးတယောက်အဖြစ် ပြောင်းလဲသွား စေတဲ့ အချိန်တွေနဲ့ အတူ အဖြစ်အပျက်တွေ ကလည်း များသားနော်။ တောမကျ မြို့မကျ ကျမတို့ရဲ့ မြို့လေးမှာ ကျမတို့အိမ်က နှစ်ဆောင်ပြိုင် ဆင်ဝင်အိမ်ကြီးနဲ့ တော်တော့်ကို ခမ်းနားထည်ဝါ တယ်လို့ သုံးလို့ရပါတယ်။ ဒီအိမ်ကြီးမှာပဲ ကျမကို အဖေနဲ့ အမေက လူလားမြောက်စေခဲ့ ပါတယ်။ အဖေကတော့ ရိုးသားတဲ့ ကြိုးစားတဲ့ ပရိဘောဂ ပစ္စည်းတွေကို ထုတ်လုပ် ရောင်းချ သူအဖြစ် ကျမတို့မြို့မှာ လူသိများပါတယ်။ ဒါတွေက အခုပြန် ပြောပြရင် ရွှေထီးဆောင်းချိန်လို့ သုံးရမယ် ထင်ပါတယ်လေ။ ရိုးသားဖြောင့်မတ်သလို မဟုတ်မခံ စိတ်ဓါတ်ရှိတဲ့ အဖေဟာ သူတို့ ကျောင်းတက်ခဲ့တဲ့ ကာလ ၁၉၆၂ ၀န်းကျင် လောက်က အဖြစ်အပျက်တွေကို ဘယ်တော့မှ မမေ့ခဲ့ဘူးဆိုတာကို ၁၉၈၈ ခုနှစ် ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံကြီး ဖြစ်တော့မှပဲ ကျမ သိရတော့တယ်လေ။ အဖေက ကျမကို မွေးဖွားချိန်က စလို့ အလုပ်ကြိုးစားခဲ့တာ သမီးကို ပညာတတ် တယောက်ဖြစ်အောင် ဆိုဆုံးမခဲ့တာတွေရဲ့ နောက်က တွန်းအားတွေဟာ ဘာတွေလဲလို့ အဲဒီရှစ်လေးလုံးလူထု လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်တော့မှ သိခဲ့ရတာလဲ အမှန်ပါ။
အဖေက ၁၉၆၂ ခုနှစ်က ပထမနှစ်ကျောင်းသားဘ၀ ပဲရှိသေးတယ်တဲ့။ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ အတူ ကျောင်းဝင်းထဲမှာ လှည့်လည်ဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးမှ သေနတ်နဲ့ မပစ်ခင် အချိန်လေးမှာပဲ ရန်ကုန်မြို့ထဲကို ခဏဆင်းသွားခဲ့တာတဲ့။ အဖေက သူကံကောင်း ခဲ့လား။ ကံဆိုးခဲ့လား ဆိုတာ ဒီနေ့ထိဝေခွဲလို့ မရသေးဘူးလို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ သူ့သူငယ်ချင်း ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ အဖမ်းခံရတာ၊ သူနဲ့ ဆန္ဒပြဖော်ပြဖက်တွေ သေနတ်ပစ်ခံပြီး ကျဆုံးခဲ့တာတွေအပေါ်မှာ သူကဘာမှ မလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပဲ တာဝန် ပျက်ကွက်ခဲ့သလို တာဝန်မဲ့ သလို ဖြစ်ခဲ့တာတွေအတွက် သူကျောင်းပြီးအောင် မတက်တော့ပဲ စာသင်ခန်းကို ကျောခိုင်းထွက်ခွာခဲ့ တယ်။ နောက် အစိုးရအလုပ် ဘယ်တော့မှ မလုပ်ဘူးဆိုပြီး ပရိဘောဂ လက်သမား အလုပ်ကို ကြိုးစား လုပ်ကိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျမဒုတိယနှစ် တက်နေတဲ့အချိန် ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာ ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်က ကိုဖုန်းမော် ကျဆုံးတဲ့ အဖြစ်ကစလို့ ကျောင်းပိတ် လိုက်ဖွင့်လိုက် နဲ့ မတည်မငြိမ် ဖြစ်လာတော့ အဖေက ကျမကို အရေးကြီးတဲ့ အချိန်ရောက်ပြီ သမီးတဲ့။ ကျမကို ငယ်စဉ်ကနေ ခုချိန်ထိ တခါမှ မပြောဖူးတဲ့ ကျောင်းသား လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ မတရားသတ်ဖြတ်ခံရမှုတွေကို အဖေက စိတ်ပါ လက်ပါနဲ့ ပြောပြပါတော့ တယ်။ အဲဒီအချိန်က အဖေ့မျက်နှာဟာ နာကျည်းနေတဲ့ လူတယောက်က ၀မ်းနည်းကြေကွဲစွာ ပြောပြနေသလိုပဲလို့ ကျမခံစားမိ ပါ တယ်။
ကျောင်းပိတ်လို့ ကိုယ့်မြို့လေးကို ကျမပြန်ရောက်တိုင်း မတ် ၁၄တုန်းကဘယ်လို၊ မတ် ၁၅ တုန်းကဘယ်လို ၊ ၁၆ ရက်နေ့တုန်းက သမီးဘယ်လိုပြေးခဲ့တာ သိလားအဖေလို့ ပြောပြတဲ့ အခါ အဖေက သေသေချာချာ နားထောင်ပြီး အသေအချာ ပြန်မေးတတ်ပေမဲ့ အရမ်းအေး ဆေးတဲ့ အမေကတော့ ၀င်မလုပ်ပါနဲ့ သမီးရယ်။ တော်ကြာ ကျောင်းထုတ်ခံ နေရမယ်တဲ့။ ဒါ့ထက်ဆိုးရင် ထောင်ကျ နေပါဦးမယ်လို့ ၀င်ပြောတတ်ပါတယ်။
အဲဒီတုန်းက အဖေက ကျောင်းသားတွေအရေးကို ကျောင်းသားတယောက်က ၀င်လှုပ်ရှား တာကို မကန့်ကွက်ပါနဲ့ ကွာ။ ဒါသူလုပ်ကို လုပ်ရမဲ့ တာဝန်တဲ့။ ကျမကို မတားပဲနဲ့ တခုခု ဖြစ်လာခဲ့ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်နိုင်အောင်၊ အလွတ်ပြေးနိုင်အောင် စသည်ဖြင့် သင်ပေးပါ တော့တယ်။ စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေက ကျောင်းဝင်းထဲမှာလည်း ရှိနေနိုင်တယ် ဆိုတာကို သူ့ခေတ်အခြေအနေနဲ့ နှိုင်းယှဉ် သတိပေးပါတယ်။ သမီးတို့မျိုးဆက် အလှည့်မှာ သမီး နိုင်သလောက်ဝန်ကို သမီးထမ်းနိုင်ရမယ်တဲ့။
ဒုတိယအကြိမ် ကျောင်းပြန်ဖွင့်တော့ အဖေ့ သတိပေးချက်တွေနဲ့ အတူ ကျမတို့ သူငယ်ချင်း တသိုက် လှုပ်ရှားကြပါတယ်။ ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့က မြေနီကုန်း အဖြစ်အပျက်နဲ့ လှည်းတန်း လမ်းထိပ် အဖြစ်အပျက်ကို မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်ခဲ့ရတဲ့ ကျမကတော့ စစ်သား ဆိုတာနဲ့ လုံထိန်း ဆိုတာကို မုန်းတီး သွားပါတော့တယ်။
ထုံးစံအတိုင်း မြို့လေးကို ပြန်ရောက်လို့ အဖေ့ကို ပြန်ပြောပြတဲ့အခါ အဖေကတော့ တောက် တခေါက်ခေါက်နဲ့ပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ ………ရှစ်ရက် ရှစ်လ ရှစ်ဆယ့်ရှစ် လူထုလှုပ်ရှားမှု ဖြစ်ပွားတော့ ကျမတို့ မြို့လေးက ရှစ်ရက်နေ့မှာ ဆန္ဒပြပွဲ မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ နောက်တနေ့ ကိုးရက်နေ့ ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကျမတို့ မြို့လေးရဲ့ ဆန္ဒပြပွဲမှာ လက်သီးလက်မောင်းတန်းရင်း ကြွေးကြော်သံတွေ တိုင်နေတဲ့ ဖေဖေ့ကို တွေ့ရပါတော့တယ်။ အမေက ကြောက်တတ်တော့ အဖေ့ကို တားပါသေးတယ်။
ဒီသမိုင်းတကွေ့က ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုမှာ ငါမပါခဲ့ရဘူးဆိုရင် တာဝန်မကျေ ဖြစ်ရတော့မယ်ကွ၊ လို့ အဖေကပြောရင်း ကျမတို့မြို့လေးရဲ့ သပိတ်ကော်မတီမှာ တက်ကြွစွာ တာဝန်ထမ်းဆောင် ပါ တော့တယ်။ အဖေဟောတဲ့ တရားတွေမှာ ဒီမိုကရေစီရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့ အတူ ၆၂ လူသတ်ပွဲအကြောင်း၊ ၇၄ အလုပ်သမားသပိတ်နဲ့ လူသတ်ပွဲ၊ လူဖမ်းပွဲတွေ အကြောင်း စုံနေတာပါပဲ။ မြို့ကလူတွေနဲ့ ကျမသူငယ်ချင်းတွေကတော့ သဘောတွေကျ လက်ခုပ်တွေ တီးလို့၊ ကျမ ကိုယ်တိုင်လည်း အဖေ့ကို အရင်ထက် ပိုလေးစားမိလာပါတယ်။
အရာရာ သတိရှိရမယ် ဆိုတဲ့ ဖေဖေက စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက် အာဏာသိမ်းချိန်မှာ အဝေးကို ထွက်ခွာဖို့ ပြင်ဆင်ပြီးနေပါပြီ။ အမေနဲ့ ကျမကို နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားခဲ့တဲ့ အဲဒီနေ့က အဖေ့ ကျောပြင်ကို ငေးကြည့်ရင်း အမေက မျက်ရည်တွေတွေ ကျလို့။ အံကို တင်းတင်းကြိတ်လို့။
Posted by ခင်မင်းဇော် at 4:01 PM
(1)62 lu that pwal so tar ko thay thay char char thi chin par tal shint`.
(2) 7JULY so tar ka bar so tar lal thi chin mi par tal.
when you have free time,plz give me the answers of these2Qs.
Waiting for your answers..........